गोरखामा गोरु तस्करी बढ्यो, मंगलबार १९ वटा तस्करी | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखामा गोरु तस्करी बढ्यो, मंगलबार १९ वटा तस्करी
Published On : १० मंसिर २०७७, बुधबार १४:०८
विज्ञ केन्द्रले गोरु ओसारपसारको कानूनी आधार खोज्यो । तस्करी गर्ने समूहले आधार पेश गर्न नसकेपछि जहाँबाट सङ्कलन गरेको हो, त्यहीँ(जरेबर) लगेर छाड्न निर्देशन दियो ।
विज्ञकेन्द्रबाट नियन्त्रणमुक्त भएपछि मंगलबार बिहान गोरु बोकेको सो ट्रक गोरु संकलन भएको स्थान(जरेबर) तर्फ नगई राजमार्ग हुदै चितवन हानियो ।
आज(मंगलबार) पनि गोरु आएको देखेपछि पछ्याउँदै ऐना पहरामा पुगेर रोक्यौँ । कुराकानी गर्दा गोरखामा आवश्यक कागजपत्र बुझाएर विधिवत रुपमा ल्याएको हो भनेर उनीहरुले दाबी गरेपछि छोदिदियौं ।’
तर पशुसेवा विज्ञकेन्द्रले भने आवश्यक कागजात नभएकाले संकलन गरेको स्थानमा लगेर छाडिदिने सर्तमा पठाएको जनाएको छ । ‘पशुचौपाया सप्लाई गर्न आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको सप्लायर्सको प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।
ढुवानीको असुविधाका कारण मरेको हुनसक्छ’, पशुरोग चिकित्सक जीवन पोखरेलले भने । सवै निकायको अरुलाई जिम्मेवारी दिएर पन्छिने प्रवृत्ति बढेसंगै गोरखामा गोरु तस्करीको क्रम पनि बढिरहेको छ । गाउँगाउँबाट गोरु संकलन गरी भारत तथा बंगलादेश पुर्‍याउने क्रम बढिरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
गोरुका लागि पैसा तिरे पनि गाउँलेले गाई सित्तैमा भिडाइदिने गरेको उनले बताए । जोत्ने बहानामा लगेपनि गाईगोरु कहाँ पुर्‍याइन्छ भन्ने बारे व्यवसायीहरु संग प्रष्ट जवाफ छैन ।